जीवन के हो ? समय के हो ?-Setoghar
जीवन के हो ? समय के हो ?
युवा जीवन एक महत्वपूर्ण समयको अंग
जीवनमा यस महान् स्वार्थ सिद्धिको लागि परामार्थ सिद्धिको आवश्यकता पर्छ । यही कारण हो कि जीवनको सफलताको लागि सदाचार, उच्च विचार, शुभ संकल्प, विनयशिलता र श्रमशक्तिको परम आवश्यकता रहन्छ । सबको साथ सहभागी हुँदै प्रेमपूर्वक कार्य गर्नु, शुभ इच्छा, श्रम तथा साहस र इमान्दारीबाट धन कमाउनु, धनलाई धर्ममा लगाउनु र त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ । यही प्रक्रियाबाट जीवनलाई आन्तरिक शक्ति प्राप्त हुन्छ । जुन स्थितिलाई शास्प्रभा कल्याण भनिएको छ । कल्याण प्राप्त गरेमा मात्र व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, परतन्त्रता, राग, द्वेष, मृत्यु, भय लगायतका विकारहरुबाट बचेर परमानन्दको भोग भोग्न पाउँछ । यसैको नाम नै जीवन हो । हर मानव जीवनमा मलाई सुख छ, मलाई कुनै दुःख पिडा, अशान्ति छैन भन्ने यो संसारमा विरल्लै मात्र पाउन सक्छौं होला, चाहे महान् धनाढ्य नै किन नहोस् या गरीब नै किन ? जबसम्म मनभित्र लोभ, लालच अहंकार, घमण्ड, इष्र्या रहन्छ, तबसम्म यो मानवजीवनमा कहिल्यै सुख हुनेछैन । संसारका हर प्राणीमा आ–आफ्नै नियम, कर्तव्य, आत्रा खाना र रुचाइ हुन्छ । जस्तै खानाको रुपमा बाघले कहिले घाँस खाँदैन, गाईले कहिले मासु खाँदैन, त्यस्तै घोडा कहिले बस्दैन र कर्तव्य, गुणी, आज्ञापालकमा कुकुर जस्तो प्राणी अरु कोही छैन । संसारका हर प्राणी हामी मानव जाती बाहेक सबैको आ–आफ्नो नियममा बसेकै हुन्छ । तर विडम्बना विवेकशील, चेतनशिल प्राणीमा सर्वश्रेष्ठ भएर पनि हामी मानवजाती अरु प्राणी सरह न कर्तव्य पालन, आज्ञाकारी र गुणी नै हुन सकेका छौं । खानाकै कुरा गर्ने हो भनेपनि हामी घाँस देखि मासु सम्म सबै खान्छौं । मौका पाए सबै गुण, कर्तव्य बिर्सेर, आफ्नै आमाबुबा समेतलाई तिरस्कार, अपमान गर्न पछि पर्दैर्नौं । उदाहरणको रुपमा बलिउड चलचित्र “पाकिजा”की नायिका गीता कपुर बिरामी हुँदा आफ्नै छोरा राजा कपुरले आमालाई अस्पतालमा छोडेर भागेका थिए रे । (अन्नपूर्ण पोष्ट १३, जेष्ठ २०७५)
१. मस्तिष्कमा समझ्दारी २. काँधमा जिम्मेवारी ३. हृदयमा इमान्दारी